FOMBA 12 HANAMBOARANA NY OLANA AMIN'NY ETONA TSY HISOKATRA - MALEMY
Fomba 12 hanamboarana ny olana tsy hisokatra amin'ny Steam
Fomba 12 hanamboarana ny olana tsy hisokatra amin'ny Steam: Raha miatrika Steam ianao dia tsy hisokatra ny olana dia mety ho izany satria ny server Steam dia tototry ny be loatra izay mety ho ny antony tsy ahafahanao miditra Steam. Ka mahareta fotsiny ary andramo indray ny fidirana Steam rehefa afaka ora vitsivitsy ary mety handeha fotsiny izany. Saingy amin'ny zavatra niainako dia tsy misy ifandraisany amin'ny rafitrao ny Steam ary noho izany dia mila manaraka an'ity torolàlana ity ianao mba hamahana ity olana ity.
Raha vao nanavao na nanatsara ny Windows 10 ianao dia mety ho lasa tsy mifanaraka amin'ny Windows 10 ireo mpamily taloha fa raha ny fahalalako azy dia tsy misy antony manokana an'ity olana ity. Raha manandrana mihazakazaka Steam.exe miaraka amin'ny tombontsoa ara-pitantanana ianao, dia mifandray amin'ny mpizara Steam fa raha vao manokatra ny Steam dia manomboka manavao ary rehefa vita ny fanamarinana fonosana sy fanavaozana dia mirodana ny varavarankely Steam tsy misy fampitandremana na hafatra diso Ka raha tsy mandany fotoana isika dia ndao jerena Ahoana ny fomba hanamboarana ny Steam Tsy hanokatra ny laharana miaraka amin'ny fanampian'ny olana amin'ny famahana olana etsy ambany.
Fomba 1: Atsaharo ao amin'ny Task Manager ny dingana mifandraika amin'ny etona
Fomba 2: Mihazakazaka Steam toy ny Administrator
Fomba 3: alao antoka fa vaovao i Windows
Fomba 4: hamaha olana eo amin'ny sehatry ny tamba-jotra
Fomba 5: Atombohy ny etona amin'ny Boot madio
Fomba 6: Fafao ireo rakitra Windows Temp
Fomba 7: Ovao ny anarana hoe ClientRegistry.blob
Fomba 8: apetraho indray ny Steam
Fomba 9 Atsaharo vetivety ny Antivirus sy ny firewall
Fomba 10: Uncheck Proxy
Fomba 11: Manaova famerenana amin'ny laoniny ny rafitra
Fomba 12: Mihazakazaha CCleaner sy Malwarebytes
1.Press Ctrl + Shift + Esc keys miaraka hanombohana Task Manager.
2. Ankehitriny mahita ny dingana rehetra mifandraika amin'ny Steam dia tsindrio havanana eo amboniny ary safidio Tapitra ny lahasa.
3. Vantany vao vita dia andramo indray manomboka mpanjifa Stem ary amin'ity indray mitoraka ity dia mety mandeha fotsiny.
4.Raha mbola mijanona ianao dia avereno indray ny PC anao ary manomboka indray ny rafitra handefasa ny mpanjifa Steam.
Na dia dingana tsotra aza ny famahana olana ity dia mety tena manampy amin'ny tranga maro izy io. Indraindray vitsy ny rindranasa mety mitaky fahazoan-dàlana hitantana, noho izany raha tsy mandany fotoana dia andao hihazakazaka Steam miaraka amin'ny tombontsoa ara-pitantanana. Mba hanaovana izany, tsindrio havanana amin'ny Steam.exe ary safidio Mihazakazaha Administrator . Satria ny Steam dia mitaky ny famakiana sy ny fanoratana tombontsoa ao amin'ny Windows, izany dia mety hamaha ny olana ary antenaina fa ho afaka hiditra Steam ianao raha tsy misy olana.
1. Kitiho ny Windows Key + dia safidiko avy eo Fanavaozana sy fiarovana.
2. Manaraka, tsindrio indray Hijerena ny vaovao farany ary alao antoka fa hametraka fanavaozana miandry ianao.
3.Araka ny fanavaozana dia apetaho ny PC ary jereo raha mahavita ianao Amboary ny olana tsy hisokatra amin'ny Steam.
2. Soraty amin'ny cmd ity baiko manaraka ity ary tsindrio Enter aorian'ny tsirairay:
3.Avereno ny PC-nao raha te hitahiry fanovana ianao ary jereo raha hainao Amboary ny olana tsy hisokatra amin'ny Steam.
Indraindray ny rindrambaiko antoko fahatelo dia mety mifanohitra amin'ny Steam Client ary mety hiteraka ny olana. Mba Amboary ny olana tsy hisokatra amin'ny Steam , Ianao dia mila manatanteraka baoty madio amin'ny PC-nao dia mandefa Steam indray.
1. Kitiho ny Windows Key + R dia soraty % temp% ary tsindrio Enter.
2. Ankehitriny fidio ny fisie rehetra voatanisa ao anaty fampirimana etsy ambony ary hamafa azy ireo mandrakizay.
Fanamarihana: Raha hamafana mandrakizay ny fisie dia tsindrio Shift + Delete.
3. Ny sasany amin'ireo rakitra dia tsy hamafa satria ampiasaina ankehitriny izy ireo, noho izany mandingana azy ireo fotsiny.
1. Mizaha mankany amin'ny Directory Directory izay matetika amin'ny:
2. Tadiavo ary omeo anarana ny rakitra ClientRegistry.blob amin'ny zavatra hafa toa ny ClientRegistry_OLD.blob.
3. Atsaharo indray ny Steam sy ilay rakitra etsy ambony.
4.Raha voavaha ny olana dia tsy ilaina ny manohy, raha tsy izany dia zahao indray ny lahatahiry etona.
5.Ray ny Steamerrorreporter.exe ary alefaso indray ny Steam.
Fanamarihana: alao antoka fa hamerina handresy ireo rakitrao amin'ny lalao izany hoe mila miverina ianao fampirimana steamapps.
1. Mizotra amin'ny Directory Directory:
2. Ho hitanao ao amin'ny lahatahiry Steamapps ny lalao fampidinana rehetra.
3.Ataovy azo antoka ny hamerenanao ity folder ity raha mila izany ianao avy eo.
4. Tsindrio Windows Key + R dia soraty foroni.cpl ary tsindrio Enter.
5. Mitadiava Steam ao amin'ny lisitra dia tsindrio havanana ary safidio Esory
6.Click esory ary avy eo ampidino avy amin'ny tranokalany ny kinova farany an'ny Steam.
7.Run Steam indray ary jereo raha mahavita ianao Amboary ny olana tsy hisokatra amin'ny Steam.
8. Mifindra ny lahatahiry Steamapps izay nanohana ny lahatahiry Steam.
1. Tsindrio havanana amin'ny Antivirus Programme icon avy amin'ny rafitry ny rafitra ary safidio Atsaharo.
2. Manaraka, safidio ny fe-potoana anaovan'ny Antivirus dia hijanona ho kilema foana.
Fanamarihana: Safidio ny fotoana faran'izay kely indrindra azo atao, ohatra, 15 minitra na 30 minitra.
3. Raha vantany vao vita dia andramo indray ny manokatra Steam ary jereo raha toa ka mivaha ny lesoka na tsia.
4. Tsindrio Windows Key + X dia safidio Takelaka fikirakirana.
5. Manaraka, tsindrio eo Rafitra sy filaminana.
6. Avy eo tsindrio Windows Firewall.
7. Ankehitriny avy eo amin'ny baravarankely ankavia tsindrio eo Alefaso na vonoy ny Windows Firewall.
8. Safidio ny vonoy Windows Firewall ary avereno indray ny PC. Andramo indray ny mihazakazaka Steam ary jereo raha hainao Amboary ny olana tsy hisokatra amin'ny Steam.
Raha tsy mandeha ilay fomba voalaza etsy ambony dia alao antoka fa hanaraka ireo dingana tena izy hampandehanana indray ny Firewall anao.
1. Kitiho ny Windows Key + R dia soraty tsofa.cpl ary tsindrio hiditra hanokatra Fananana Internet.
2. Manaraka, Mandehana any Takelaka misy ny fifandraisana ary safidio ny fikirana LAN.
3.Sidio ny fampiasa server proxy ho an'ny LAN anao ary alao antoka Tadiavo ho azy ny fikirana nozahana.
4.Click Ok avy eo Ampiharo ary avereno ny PC-nao.
1.Press Windows Key + R ary karazana sy-bbt.cpl avy eo dia midira enter.
2.Select Fiarovana ny rafitra kiheba ary safidio Famerenana amin'ny laoniny ny rafitra.
3.Click Manaraka ary safidio ny irina Teboka Famerenana amin'ny laoniny ny rafitra .
4. Araho ny torolàlana eo amin'ny efijery mba hamenoana ny famerenana amin'ny laoniny ny rafitra.
5. Aorian'ny reboot, mety ho afaka Amboary ny olana tsy hisokatra amin'ny Steam.
1.Download ary apetraka CCleaner & Malwarebytes.
2. Mihazakazaha Malwarebytes ary avelao izy hanitsy ny rafitrao raha mila rakitra manimba.
3.Raha hita ny malware dia esoriny ho azy ireo izany.
4. Ankehitriny mihazakazaha CCleaner ary ao amin'ny faritra Cleaner, eo ambanin'ny kiheba Windows, soso-kevitra izahay hanamarina ireto safidy manaraka ireto mba hodiovina:
5. Raha vantany vao azonao antoka fa voamarina ireo teboka mety dia kitiho fotsiny Run Cleaner, ary avelao CCleaner hihazakazaka ny làlany.
6. Mba hanadiovana ny rafitrao dia safidio bebe kokoa ny vakizoro Registra ary alao antoka fa voamarina ireto manaraka ireto:
7. Safidio ny scan ho an'ny olana ary avelao ny CCleaner hijerena, avy eo tsindrio Amboary ireo olana voafantina.
8.Rehefa manontany i CCleaner Ianao ve mila fanovana nomaniny ho solon'izay ny rezistra? mifidy Eny.
9. Raha vantany vao vita ny backup dia safidio ny olanao rehetra voafantina.
10.Avereno ny PC-nao raha te hitahiry fanovana ianao ary zahao raha hainao Manamboatra tsy afaka mifandray amin'ny hadisoana amin'ny tambajotra Steam.
Izay no nahombiazanao Amboary ny olana tsy hisokatra amin'ny Steam fa raha mbola manana fanontaniana momba an'ity fampianarana ity ianao dia aza misalasala manontany azy ireo ao amin'ny faritra maneho hevitra.
ny fomba famadihana flash drive ho ram
ny fomba fampiasana flash drive ho ram windows 10
tsy mandeha ny serivisy fanontana printy
mandresy bsod fitadidiana fahatsiarovana 10